Hotelslọ nkwari akụ dị na Toledo | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | ulo, España
Ekwenyere m na mgbe ị na-aga obodo ochie, ọ kachasị mma ịnọ na ya hotels ndị nwere ụdị ma ọ bụ na ha na-arụ ọrụ na ụlọ akụkọ ihe mere eme, ndị gbara otu narị afọ. Tinye amara na nleta ahụ, ị ​​naghị eche?
Dịka ọmụmaatụ, Toledo Ọ bụ ihe ịrịba Spanish na obodo na ya mere ihe akụkọ center bụ mma na ebe kacha mma ịnọ. Ọ bụ ya mere m ji chọọ taa ebe obibi dị ebe a na-atụ aro m. Taa mgbe ahụ hotels na amara na Toledo.
1 Plọ nkwari akụ Pintor El Greco
2 Nkwari akụ Carlos V
3 Clọ nkwari akụ Casona de la Reyna
4 Reallọ nkwari akụ Real de Toledo
5 Bolọ nkwari akụ Boutique Adolfo
Plọ nkwari akụ Pintor El Greco
Nke a bụ ụlọ nkwari akụ nke Anọ kpakpando Atiya nke dị n'okporo ámá Alamillos Del Tránsito, n’ime Obodo Ndị Juu. Ọ dị nkeji ole na ole site na El Greco Museum na Santa María la Blanca Synagogue mara mma ma dị nso na Fuensalida Obí. Ọ bụghị owuwu ochie mana ọ dị ka ya.
Thelọ oriri na nkwari akụ ahụ O nwere ime ụlọ 57 gbasaa n'elu ala ise. Ha niile nwere ntụ oyi na Wi-Fi njikọ freentanetị na-akwụghị ụgwọ, ime ụlọ ịwụ ahụ nkeonwe na telivishọn nwere ọwa dijitalụ. E nwere ụmụ ejima mara mma, ejima dị elu, ejima + mgbakwunye, ejima ka elu + ụma na ime ụlọ abụọ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ okomoko karị, enwere ọnụ ụlọ dị oke ọnụ, nke otu n’ime ha kachasị mma n’enweghị mgbagha ọ bụla nwere ọnụ ụlọ kacha adị elu.
Hotellọ nkwari akụ niile nwere usoro n'etiti kpochapụwo na nke oge a. Lọ nwekwara ihe owuwu ụzọ mbata, nwere ọrụ ịhịa aka na nabata anu ulo. N'ime e nwere ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ na ugbu a na ezumike na-eru nso e nwere menu Afọ Ọhụrụ na nke Afọ Ọhụrụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ iji ezumike ma ọ bụ gaa n'oge oyi ana m adọ gị aka na ntị enwere Black Friday site na 24/11 ruo 2/12 maka ịnọ n'etiti December 25 na March 31 ndị bụ maka a 30% kwụsịrị.
Nkwari akụ Carlos V
Nke a bụ ụlọ nkwari akụ nke atọ kpakpando Atiya nke di na Plaza Homo Magdalena, isi obodo. Onyinye Roomslọ iri isii na asaa n'ime ụlọ a rụzigharịrị ma rụzigharịa n'oge na-adịbeghị anya, ma kee ha niile ọkọlọtọ na ọnụ ụlọ adịchaghị. Ha niile nwere igwe ikuku na kpo oku, ime ụlọ ịwụ, ekwentị na ekwentị na satịlaịtị na TV. WiFi bụ n'efu, enwere ụlọ mmanya, ebe a na-adọba ụgbọala na mbugo.
Hotellọ nkwari akụ ahụ nwere ebe dị mma ọ bụ naanị 200 mita si isi square, n'okpuru ndò nke Alcázar, naanị 10 nkeji si AVE ụgbọ okporo ígwè na site na ọdụ ụgbọ ala, na atọ site na akụkọ ihe mere eme Plaza de Zocodover. Lọ ahụ malitere site na ngwụsị afọ 40, na mbụ, e lere ya anya dị ka ụlọ ọgwụ, mana dịka m kwuru na emegharịrị ya. Ndị ama ama dịka Catherine Deneuve, n'okpuru nduzi nke Luis Buñel, John Wayne, Rita Hayworth, Rock Hudson ma ọ bụ n’oge na-adịbeghị anya Johnny Depp.
Hotellọ nkwari akụ ahụ Carlos V nwere otu, ụlọ abụọ, okpukpu atọ, na jacuzzi, na echiche nke Toledo, ha nile emezigharị, ha niile dị ezigbo mma. Otu ụlọ dị ihe dị ka mita asatọ, mita itoolu, nke abụọ n'etiti 13 na 16 mita, otu ihe ahụ bụ ọnụ ụlọ dị elu nke nwere hydromassage, na atọ nwere otu nha.
N'ụtụtụ, na ezumike nke ụlọ oriri na ọ hotelụ hotelụ họtel, ama ama ya deayuno Mudejar, na n'ehihie ọ dịghị ihe dị mma karịa ịnọdụ ala na mbara ala mara mma, Carlos n’elu ụlọ, nke nwere nnukwu echiche banyere Alcazar, Katidral na Toledo niile. Na ndị ọbịa na-ebugharị n'ụgbọ ala naanị 200 mita, enwere ebe nchekwa na-eche nche na-efu euro 15 kwa ụbọchị.
Clọ nkwari akụ Casona de la Reyna
Hotellọ nkwari akụ a sikwa atọ kpakpando Atiya ọ dịkwa na okporo ámá Carreras San Sebastián. Ọ dị na Ronda de Toledo, Nkeji ise site na nkeji iri na ise nke ndị Juu na Katidral. Ọ bụ nke kacha ọhụrụ na họtelu ekwuru ugbu a kemgbe ọ malitere n'afọ 2000. N'ezie, Ewubere ya na ntọala nke ụlọ ochie Toledo site na narị afọ nke XNUMX.
Hotellọ nkwari akụ ahụ nwere Ime ụlọ 25 na ala atọ. 22 bụ ime ụlọ abụọ, abụọ dị mfe na otu bụ ụlọ. Ha niile nwere ikuku ikuku, ime ụlọ ịwụ ahụ na draya ntutu, satịlaịtị ma ọ bụ USB TV, nchekwa, obere ụgbọ na nchekwa. Gorịgo n'ebe ahụ bụ igwe mbuli. Hotellọ nkwari akụ ahụ nwekwara ụlọ mmanya, ụlọ TV na ụlọ oriri na ọ .ụ .ụ. Accessntanetị sitere na ụlọ pụrụ iche ma ọ bụ WiFi.
Hotellọ nkwari akụ a anaghị ekwe ka anụ ụlọ. Ga-agbakọọ site na 44 euro kwa abalị ma ọ bụrụ na ịdee akwụkwọ site na weebụsaịtị gị, ị nwere 5% ego.
Reallọ nkwari akụ Real de Toledo
Hotellọ nkwari akụ a nke narị afọ nke XNUMX nwere atọ kpakpando Atiya na ọ bụ na Real del Arrabal, na akụkọ ihe mere eme center. O si na Plaza de Zocodover, nke di n'ihu ulo alakụba nke Cristo de la Luz na Puerta del Sol, ma bụrụ mara mma kpughere brik na-arụ iron ewu. Alcazar dị narị mita isii, otu ahụ bụ Primada Katidral na Churchka Santo Tomé nke eserese El Greco dị narị mita asatọ.
Thelọ oriri na nkwari akụ ahụ ọ bụ ọnọdụ ezinụlọ ọnụ ụlọ ndị ahụ, ọ bụ ezie na ha dị mfe, sara mbara ma na-arụ ọrụ. Enwere Roomslọ iri isii na asaa na ngụkọta, n'etiti 16 na 19 square mita nke elu. Enwere ụlọ otu, okpukpu abụọ, ejima na ezinụlọ. Ha niile nwere ikpo oku na ntụ oyi, ekwentị ọkpụkpọ, tebụl, TV na ntanetị zuru oke.
Hotellọ nkwari akụ ahụ na-enyekwa nri nri ụtụtụ na ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ na menu kwa ụbọchị na ego ọnụ.
Bolọ nkwari akụ Boutique Adolfo
Nke a bụ ụlọ nkwari akụ nke kpakpando anọ dị na Plaza de Zocodover, dị mita 200 site na Puerta del Sol de Toledo na ebe ndị njem nlegharị anya nke obodo ahụ. Na ihe ọma bụ na ime ụlọ niile nwere ọmarịcha elere na akụkụ anọ ahụ ha dịkwa ezigbo mma, na ọnụahịa site na euro 160 abalị naanị na ulo.
Hotellọ nkwari akụ ahụ na-enye Roomlọ Boutique, nụchara nke ọma, na-ele square, imepụta oge na 30 square mita na ime ụlọ ịwụ marble. Enwekwara ime ụlọ Junior Suite, atọ na mkpokọta, yana ime ụlọ na ime ụlọ yana mita 40.
A na-ahụkarị ọmarịcha ụlọ nkwari akụ ahụ site na ahụmịhe nke ụlọ oriri na ọ offerụ andụ na onyinye gastronomic ya. E nwere ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ na-anọ na Zocodover ma nweekwa kafe, Café el Español, nke na-enye ihe ọ drinksụ drinksụ na tii ehihie. Dị ka o kwesịrị ịdị, ndị a abụghị naanị ụlọ oriri na ọ cityụ hotelsụ na nnukwu obodo Toledo, mana enwere m olileanya na ha ga-ejere gị ozi maka ọpụpụ gị ọzọ na obodo a nke narị afọ gara aga.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » España » Utilọ nkwari akụ dị na Toledo
Ihe ị ga-ahụ na Sil Canyons na Galicia